Bopha umhleli weVidiyo yakho ukuze ubenenye yeziNgqamaniso zeaudio | Martech Zone
Bopha umhleli weVidiyo yakho yenye yezi nge-Audio Synching
NgoLwesibini, Juni 11, 2019 NgoLwesibini, Juni 11, 2019 Douglas Karr
Kule veki iphelileyo, bendisebenza ngokudibanisa ubungqina bomthengi kumthengi. Umfoti wevidiyo ababesebenze naye kwakumnandi, ebabonelela ngevidiyo eluhlaza kunye nevidiyo kubo xa befuna ukudibanisa ividiyo kwixa elizayo. Babelane ngeefayile ze-MXF eluhlaza kunye nam ukuze ndizikhuphele kwaye ndaqonda kwangoko ukuba ndingaphezulu kwentloko yam.
Ingcinga yam yayikukuba ndiza kupopisha iividiyo ezingafunekiyo kwi-iMovie, ndidibanise incoko, ndiphose i-intro, i-outro, kunye ne-track yomsindo kubo, kwaye ndiyenze. Nangona kunjalo, i-videographer yobuchwephesha ibambe ii-angles ezininzi ezivela kwiikhamera ezahlukeneyo… kwaye yimbono enye kuphela enesandi seprimiyamu. Oku kuqhelekile ukuba ungumntu oyingcali, kodwa wayephezu kwentloko yam.
NgeMovie okanye uMenzi weVidiyo yeWindows, ndinomda wexesha elinye wevidiyo. Ke, kuya kufuneka ndihlele i-engile nganye yekhamera ngokugqibeleleyo, emva koko ndizame ukuthelekisa ividiyo kunye nengoma ye-audio-umsebenzi ongenakwenzeka. Ngaphandle kweekhamera ezongeziweyo zekhamera, ividiyo ayizukuchaphazela. Ixesha lokufowunela umpro!
My Videudio unesitudiyo kufutshane neofisi yam yasekhaya, ke ndiye ndaqhuba imoto ndancokola naye ukuze ndibone ukuba kungenziwa ntoni. Ukhawuleze wandifundisa ngemida yesoftware yokuhlela kwaye wandibonisa ukuba angazongeza njani ngokulula iividiyo ezininzi okanye ingoma eyahlukileyo kumculo wakhe kwaye azihambelanise ngonqakrazo lweqhosha.
I-AJ yabelane ngezinye zeephakeji ezithandwayo zokuhlelwa kwevidiyo ezinikezela ungqamaniso lweklip:
Adobe Premiere Pro -Isi skrini esingentla kwesoftware ka-AJ yokuthanda ividiyo. INkulumbuso Pro sisoftware ekhokelayo yokuhlela ividiyo yefilimu, T, kunye neWebhu.
Umqambi Kuqala I-AVID ngumgangatho ophambili weshishini lokuhlela iifilimu, iMiboniso, kunye neeNtengiso. Inyani yokuba benze inguqulelo yasimahla inkulu! (I-AJ ikwaqinisekisiwe nge-AVID)
Hitfilm Express -Hitfilm expression ngumhleli we-indy we-indy. Kusimahla kwaye ayisiyiyo umhleli kuphela (njengenkulumbuso) kodwa kunye nomqambi (emva kweZiphumo) i-AJ ihlala icebisa le njengenye indlela yasimahla.
Umhleli weVidiyo yeFilimuoraPro -Kudala ndisebenzisa inkqubo yoguquko luka Wondershare kwaye isebenza ngokungagungqiyo. Andithandabuzi ukuba iphakheji yabo efikelelekayo yokuhlela ividiyo ilungile- kwaye inika ukungqinelaniswa komsindo ngokunjalo.
Ungqamaniso lomsindo lunokuthatha nayiphi na ingoma kunye nesandi kwaye litshatise amaza omsindo ngokugqibeleleyo, nokuba umgangatho weaudiyo awuhambelani. Kule meko, bendinevidiyo enye enesandi esigqibeleleyo, kunye nenye enekhamera. Isoftware ichonge zombini kwaye yahambelana nomkhondo wevidiyo ngokugqibeleleyo. Ke, i-AJ ikwazile ukufakela ii-angles zekhamera ngelixa igcina ingoma elungileyo yeaudiyo.
Kwimizuzu nje engephi, i-AJ yayisele ilungile ividiyo endandizame ukusebenza kuyo iiyure. Oku kundenze ndacinga kwakhona ndisebenzisa iMovie ukuhlela ividiyo yam. Kunye neyam Adobe Creative Cloud ilayisensi, ndinokukhuphela kwaye ndifunde iNkulumbuso Pro… ke ndicinga ukuba lixesha lokuba ndiyiphucule!
Ke nokuba ngaba ziziiklip zevidiyo ezininzi ezinesandi esifanelekileyo, okanye iklip yevidiyo kunye nesandi esongezelelweyo esivela kwirekhodi yakho ...
Kwaye, ngokwexesha elininzi levidiyo, unokulungelelanisa kwaye ukhethe ezo mbono ufuna ukuzenza ividiyo ibe nobungcali kunye nefuthe.
Qaphela: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana kwiAdobe yokuQamba kwamafu.
tags: Inkulumbuso ye-adobe prongxameleumqambi kuqalafilmora umhleli wevidiyoukuhlela ividiyoummangaliso